उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ! « Drishti News – Nepalese News Portal
उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन !
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबारसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ एक सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी संसद् सचिवालयबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई नेकपा ९माओवादी० केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद राष्ट्रिय सभामा खाली भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आयोगलाई संसद् सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको ३५ दिन कि निर्वाचन मिति तोकिएको ३५ दिन भन्नेबारे कानुनमा प्रस्ट नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । त्यसले गर्दासमेत उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलता छ ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।